Rooble oo ku dhawaaqay in la guda galayo doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Ra'iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhawaaqay in Dowladdu ay go'aansatay in la guda-galo doorashada, kaddib kulanno uu la qaatay madaxweynayaasha dowlad gobolleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ra'iisal Wasaaraha ayaa lagu sheegay in Xukuumaddu ay ka shaqeyneysay sidii loo xalin lahaa khilaafka ka jira doorashada, iyadoo 'baaqyo loo diray; dhinacyada ay quseyso.
Rooble ayaa sheegay in Dowladda ay ugu danbeyntii go'aansatay in doorashada la guda-galo lagana bilaabo xarumaha dowlad gobolleedyada diyaarka u ah qabashada doorashada.
Hadalka Rooble ayaa imanaya xili wali Midowga Musharixiinta iyo Maamuladda Puntland iyo Jubbaland ay kasoo horjeedaan doorashada iyaga oo dalabnaya in la saxo qaladaadka jira ka hor inta aan doorashada la aadin,